Nkwukọrịta Pipeline, Onye edemede na NAB Show News | 2021 NAB Show Onye Mmekọ Media na Onye Mmepụta NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Home » Onye edemede Chepụtara: Nkwukọrịta Pipeline
Onye edemede Chepụtara: Nkwukọrịta Pipeline
Mee 18, 2021 - Ntụkwasị obi dị oke mkpa maka netwọkụ na-agbasa ozi 24 kwa ụbọchị, ụbọchị asaa n'izu n'asụsụ atọ dị iche iche na Florida na agwaetiti 13 Caribbean. Playout nkesa ọdịda abụghị nhọrọ. Mgbe usoro ihe egwuregwu ya malitere ifriizi ọtụtụ ugboro kwa ụbọchị, ndị otu na Miami TV nke dabeere na Miami tụgharịrị na PlayBox Neo inweta ...
Abuja, Nigeria, Mee 5th, 2021 - PlayBox Neo na-ekwuwapụta mmecha nke usoro mgbasa ozi mgbasa ozi maka ọwa TV nke ụwa nke dị na Lagos, Nigeria. Usoro a họọrọ ma jikọta ya na E & E Solutions nke na-arụ ọrụ site n'isi ụlọ ọrụ nchịkwa dị na Abuja na ụlọ ọrụ teknụzụ dị na Lagos. “PlayBox Neo si na igbe tinye igbe dị mma maka ọrụ a,” ka ndị na-ekwu ...
KOTV na-eme ka ihu igwe dị elu na FOR-A FVW-700 Telestrator
Cypress, CA, Mee 6, 2021 - FOR-A Corporation nke America taa mara ọkwa KOTV, ndị mmekọ CBS na-eje ozi na Tulsa, Okla. (DMA # 58), na-eme ka ngalaba ihu igwe akụkọ ya na FVW-700 telestrator dị elu. N'agbanyeghị amụma ahụ, FVW-700 ndụ annotation ngwaọrụ egosipụtara na ọ bara uru ebe ọ bụ na arụnyere ya na ngwụsị March. “Mgbe onye na-amụ gbasara ihu igwe mere‘ Akpa ...
Netwọk TVU na-enweta oku maka NFL Draft Live Video Distribution
Ndị otu 32 niile jiri Grid na TVU Grid na TVU N'ebe ọ bụla na Draft Rooms ha na Off-Site Player Prospect footage jisiri ike site na TVU Servers MOUNTAIN VIEW, CA - Mee 5, 2021 - TVU Netwọk, ahịa na teknụzụ onye ndu igwe ojii na IP dị ndụ vidiyo. azịza, bụ ihe kachasị elu na 2021 NFL Draft maka igwe ojii na-ekesa vidiyo. Ndi otu NFL 32 niile ...
New FOR-A MV-1640IP Multi-Viewer Wetara Baseband arụmọrụ ka IP-Dabere Workflows
Cypress, CA, Eprel 28, 2021 - FOR-A Corporation nke America taa kwupụtara ọkwa MV-1640IP ọhụrụ ọtụtụ ndị na-ekiri ugbu a na-ebufe. Ezubere maka IP ma ọ bụ ngwakọ mmepụta arụmọrụ, 1RU MV-1640IP na-akwado ntinye ntinye 32 (16 IP na 16 SDI) na ntinye nyocha ise, ma gụnye ọtụtụ ụdị atụmatụ ahụ dị na ndị ọzọ MV Series multi-viewers maka baseband system. Na ...
Onye isi ahia Grass Valley na-esonye na TVU Networks dị ka Global VP nke Marketing Strategic
MOUNTAIN VIEW, CA - Eprel 27, 2021 - Netanya TVU, onye ahịa na teknụzụ nke igwe ojii na IP na-eweta vidiyo vidiyo, taa kwupụtara nhọpụta nke David Cohen, onye bụbu onye isi oche nke Marketing Communications na Grass Valley, dị ka ụlọ ọrụ ọhụrụ ahụ Onye isi oche ụwa, Mgbasa Ozi Ebumnuche. Cohen ga-akọ akụkọ banyere TVU Networks CEO Paul Shen. Na ọrụ ọhụrụ ya, ...
Ikike a kpochapuru na ọdọ mmiri nri nke Okwu US Mbụ na Nkwonkwo Oge Nnọkọ nke Congress Wepụta na Igwe ojii TVU MediaSource Platform
MOUNTAIN VIEW, CA - Eprel 20, 2021 - TVU Netwọk, ahịa na teknụzụ onye ndu igwe ojii na IP na-eweta vidiyo vidiyo, taa kwupụtara na ụlọ ọrụ na-enye nri-ekpochapu ọdọ mmiri nri na ọrụ ntanetị oge n'oge Onye isi ala US. Okwu Biden buru ụzọ gaa nnọkọ njikọ nke Congress na Eprel 28th. Adreesị nkwonkwo mbụ nke onye isi ala US bụkarị ...
ASG Onye isi oche Dave Van Hoy na-ekwu okwu Mmepụta Igwe ojii na SVG Systems Integrator Summit
EMERYVILLE, CALIF., APRIL 19, 2021 - Advanced Systems Group (ASG), onye ndu teknụzụ mgbasa ozi na ụlọ ọrụ injinia, kwuru taa Dave Van Hoy, onye isi oche nke ASG, ga-esonye na mkparịta ụka mkparịta ụka maka imepụta igwe ojii n'izu a na SVG 2021 Systems Integrator Summit. Ndi Egwuregwu Video Group gosipụtara, ihe omume ụbọchị abụọ ahụ ga-amalite na Eprel 21. “Ọrụ ojii & Akụrụngwa: ...
Page 1 nke 9112345 » 102030...Ikpeazụ »